Nampiato ny dia any amin'ireo firenena Afrikana Tatsimo izao i Canada noho ny Omicron
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Nampiato ny dia any amin'ireo firenena Afrikana Tatsimo izao i Canada noho ny Omicron
Nanamafy ny tompon'andraikitra momba ny fahasalamam-bahoaka any Afrika Atsimo fa misy karazana ahiahy COVID-19 vaovao (B.1.1.529) hita ao amin'io firenena io. Tao anatin'ny 24 ora lasa izay, ity variana ity - antsoina hoe Omicron avy amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana - dia hita any amin'ny firenena hafa koa. Amin'izao fotoana izao, ny variana dia tsy hita any Canada.
Hatramin'ny niandohan'ny areti-mifindra, ny Governemanta Canada dia nametraka fepetra teo amin'ny sisin-tanintsika mba hampihenana ny loza ateraky ny fanafarana sy fifindran'ny COVID-19 sy ny karazany any Canada mifandraika amin'ny dia iraisam-pirenena. Androany, ny minisitry ny Fitaterana, ny Honorable Omar Alghabra ary ny Minisitry ny Fahasalamana, Jean-Yves Duclos, dia nanambara fepetra vaovao momba ny sisintany hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny Kanadiana.
Ho fepetra fitandremana, hatramin'ny 31 Janoary 2022, ny Governemantan'i Kanada dia mampihatra fepetra nohatsaraina sisintany ho an'ireo mpandeha rehetra izay tany amin'ny faritra atsimon'i Afrika — anisan'izany i Afrika Atsimo, Eswatini, Lesotho, Botswana, Zimbaboe, Mozambika ary Namibia— ao anatin'izany. ny 14 andro farany talohan'ny nahatongavany tany Canada.
Ireo teratany vahiny izay nandeha tany amin'ireo firenena ireo tao anatin'ny 14 andro teo aloha dia tsy mahazo miditra any Canada.
Ny olom-pirenena Kanadiana, ny mponina maharitra ary ny olona manana sata eo ambanin'ny lalàna Indiana, na inona na inona sata vaksiny na efa nanana tantaram-panadinana tsara ho an'ny COVID-19 teo aloha, izay efa tany amin'ireo firenena ireo tao anatin'ny 14 andro teo aloha, dia iharan'ny fitsapana nohatsaraina. , fanaraha-maso, ary fepetra fanagadrana.
Ireo olona ireo dia takiana hahazo, ao anatin'ny 72 ora miala, fitsapana molekiola COVID-19 ratsy manan-kery any amin'ny firenena fahatelo alohan'ny hanohizana ny diany any Canada. Rehefa tonga any Canada, na inona na inona sata vaksiny na efa nisy tantaram-panadinana tsara ho an'ny COVID-19 teo aloha, dia iharan'ny fitsapana tonga avy hatrany izy ireo. Ny mpandeha rehetra koa dia tsy maintsy mamita andrana amin'ny andro faha-8 aorian'ny fahatongavana sy manao confinement mandritra ny 14 andro
Ny mpandeha rehetra dia halefa any amin'ny tompon'andraikitry ny Public Health Agency of Canada (PHAC) mba hahazoana antoka fa manana drafitry ny confinement mety izy ireo. Ireo tonga amin'ny alàlan'ny fiaramanidina dia tsy maintsy mijanona ao amin'ny toeram-pisakafoanana voatondro mandritra ny fiandrasana ny valin'ny fitsapana fahatongavany. Tsy avela handeha izy ireo raha tsy efa nankatoavina ny drafitry ny confinement ary nahazo valim-panadinana ratsy ny fahatongavany.
Ireo tonga an-tanety dia azo avela handeha mivantana any amin'ny toerana mitoka-monina sahaza azy. Raha tsy manana drafitra sahaza izy ireo - izay tsy hifandraisany amin'ny olona tsy niara-dia taminy - na tsy manana fitaterana manokana mankany amin'ny toerana misy azy ireo, dia hotarihina hijanona ao amin'ny toeram-ponenana voatondro izy ireo.
Hisy ny fanaraha-maso bebe kokoa momba ny drafitry ny confinement ho an'ireo mpandeha avy amin'ireo firenena ireo ary ny fanaraha-maso hentitra mba hahazoana antoka fa manaraka ny fepetran'ny confinement ny mpandeha. Ankoatr'izay, ireo mpandeha, na inona na inona sata vaksiny na efa nanana tantaram-panadinana tsara ho an'ny COVID-19 teo aloha, izay niditra tao Canada avy any amin'ireo firenena ireo tao anatin'ny 14 andro, dia hifandray sy hotarihina hanao fitiliana sy hanao confinement eo am-piandrasana azy. ny valin'ireo fitsapana ireo. Tsy misy fanavakavahana omena manokana amin'ireo fepetra vaovao ireo.
Manoro hevitra ny Kanadiana ny Governemanta Kanada mba tsy handeha any amin'ny firenena amin'ity faritra ity ary hanohy hanara-maso ny zava-misy mba hampahafantarana ny hetsika ankehitriny na ho avy.
Canada dia manohy mitazona fitiliana molekiola mialoha ny fidirana ho an'ireo mpandeha iraisam-pirenena efa vita vaksiny sy tsy vita vaksiny tonga avy any amin'ny firenena rehetra mba hampihenana ny risika amin'ny fanafarana COVID-19 ao anatin'izany ny variana. Nanara-maso ny angon-drakitra tranga ihany koa ny PHAC, tamin'ny alàlan'ny fitiliana tsy maintsy atao tsy maintsy atao rehefa miditra any Canada.
Hanohy hanombantombana ny toe-draharaha mivoatra ny Governemanta Canada ary hanitsy ny fepetran'ny sisintany araka izay ilaina. Raha mbola mitohy ny fanaraha-maso ny fiantraikan'ny variana rehetra any Canada, ny vaksiny, miaraka amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fepetra tsirairay, dia miasa mba hampihenana ny fihanaky ny COVID-19 sy ny karazany.